कोरियामा बढ्ने भयो बिजुलीको भाउ, कति बढ्दैछ हेरौं – Eps Sathi
September 23, 2021 698
दक्षिण कोरियामा विजुलीको भाउ बढ्ने भएको छ। कोरियाको सरकारबाट सन्चालित कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (केप्को) ले विहिवार गरेको घोषणा अनुसार सन २०२१ को चौथो त्रैमासमा विजुलीको महशुल दर बढाउने तयारी गरिएको हो। विश्ववजारमा नै विध्युत उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कच्चा पदार्थमा भएको मूल्य बृध्दिका कारण कोरियामा पनि महशुल दर बढाउनु परेको केप्कोले बताएको छ।
अहिले कोरियामा दिइरहेको प्रतिकिलोवाट ३ वन छुट अब बाट हटाइने भएको छ। यो छुट चालु बर्षको पहिलो त्रैमासबाट दिन सुरु गरिएको थियो। यसले अब हरेक घर परिवारको विध्युत महशुल रकम बढ्नेछ। अब लागू हुने नयाँ दर अनुसार ४ जना सदस्य रहेको एउटा सामान्य परिवारको मासिक विध्युत महशुल करिब १ हजार ५० वनले बढ्नेछ।
दक्षिण कोरियामा सन २०१३ को नोभेम्बर पछि पहिलो पटक बिध्यु महशुल दर बढाउन लागिएको हो। कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशनले आफ्नो नाफा समायोजनका लागि भन्दै विश्ववजारको स्थिति अध्यन गरी विध्युत महशुल समायोजन गर्ने निति अवलम्बन गरेको छ। यस अघि यस संस्थाले निश्चित दरमा मात्रै महशुल लिने गरेको थियो। अबको निति अनुसार हरेक ३ महिनामा विश्ववजारमा ग्यास, कोइला तथा कच्चा तेलको मूल्यका आधारमा कोरियामा पनि विजुलीको महशुल दर समायोजन गरिनेछ।
सन्चालन खर्च बढेसँगै यस कम्पनीको सन २०२१ को दोश्रो त्रैमासमा मात्रै खुद घाटा ६ सय ७३.९ बिलियन वन घाटा व्यहोर्नु परेको थियो। कोरियामा विजुलीको भाउ बढ्ने भएसँगै यसले महङ्गी बढाउने अनुमान गरिएको छ। योनहाप
Prevखुल्यो आजबाट साहस उर्जाको आइपिओ, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ता भर्दा ठिक?
Nextउदयपुरमा अमेरीकाको न’क्क ली भिजा देखाई एक युवकले गरे नर्ससँग विवाह